» हामी शसक्त रुपमा बजारमा देखा पछौं देशको ठूलो विकास बैंक बन्छौ
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले एकता विकास बैंक र नेपाल आवास फाइनान्ससँग एक आपसमा गाभिए (मर्ज) भएपछि जेठ २८ गतेबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेको छ । काठमाडौंको तीनकुनेमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले दुई वित्तीय संस्थासँग मर्जपछि चुक्ता पुँजी एक बर्ष १४ करोड पुर्याएको छ । बैंकको ३३ वटा शाखा मार्फत देशभरबाट कारोबार गरिरहेको छ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले १२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप र १० अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी बृद्धि गर्न गरेको व्यवस्था अनुसार सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले दुई संस्थासँग मर्ज गरेर राष्ट्र बैंको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेको छ । यसै विषयमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजयकुमार मिश्रसँग मर्जपछि बैंकको अवस्था, बैंकका प्राथमिकता र आगामी दिनको योजना लगायतको विषयमा केन्द्रीत रहेर बैकिङ् समाचारले गरेको कुराकानीः–
–२२ वटा राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकहरु रहेका छन् । २२ वटा मध्ये पाँच वटा विकास बैंक कमर्सियल बैंक हुने अवस्थामा रहेका छन् । १७ वटा विकास बैंक मात्र रहने अवस्थामा रहेका छन् । मेरो विचारमा ८ देखि १० वटा राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बजारमा रहने छन् । आर्थिक सूचाङक हर्ने हो भने यो बर्ष विकास बैंकहरुले राम्रो गरेका छन् । अहिले विकास बैंकहरु कमर्सियल विकास बैंक भन्दा राम्रो अवस्थामा रहेका छन् । क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकलाई बढी समस्या पर्न गयो । एक जिल्ले, तीन जिल्ले विकास बैंकलाई समस्या परेको देखियो । ती बैंकहरुले ठूलो मात्रामा पू्ँजी बृद्धि गनुपर्ने देखिएको छ ।
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले ग्रामिण क्षेत्रमा पुगेर सेवा सुविधा पुर्याउदा नागरिकहरुको कस्तो अपेक्षा पाउनु भएको छ ?
–पुँजी बृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने ग्रामिण क्षेत्रमा खोलिएका विकास बैंक बन्द हुने अवस्थामा आउँछ । पुँजी बृद्धिले बैंकको पहुँच केही घटने देखिएको छ । ग्रामिणस्तरमा बैंकको पहुँच त विकास बैंकले बढाउदै आएका छन् । जनताको अपेक्षा गाउँगाउँमा बैंक आओस भन्ने छ । मर्जरको थोरै असर गर्ने हो कि भन्ने देखिएको छ । यसले बैकिङ पहुँचलाई थोरै घटाउँछ । जनताको चाहना अझ धेरै राम्रो सेवा पाए हुन्थ्यो भन्ने छ ।
सरकारले प्रेत्यक नेपालीको बैंक खाता हुने कुरा अगाडि ल्याएको छ नि ?
–यो तत्काल सम्भव देखिदैन । हुनु पर्छ राम्रो कार्यक्रम हो । महत्कांक्षी पनि हो । अहिलेसम्म ४५ प्रतिशत मात्र बैकिङ् पहुँच पुगेको छ । जबसम्म बैंकको शाखा गाउँगाउँ पुर्याउन सकिदैन भने सबै नेपालीको शाखा कसरी खोलिन सक्छ ? दुई दिन हिडेर मानिसहरु खाता खोल्न आउदैनन । हिडेर बैकिङ् कारोबार गर्दैनन । हामीले जबसम्म ग्रामिण क्षेत्रमा बैकिङ् सेवा पुर्याउन सक्दैनौ तबसम्म सबै नेपालीको बैंक खाता सम्भव छैन् । शाखा रहित बैंकहरुले जसरी सेवा दिन थालका छन त्यसले केही पहुँच बढाएको छ । अब आउने पाँच बर्षमा सबै नेपालीको खाता सम्भव छ । यस आर्थिक बर्षभित्र भने सम्भव छैन ।
तपाईहरुको भूमिका के हुन्छ त ?
–हामीले वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका छौं । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको अधिकांश ग्रामिण क्षेत्रमा शाखाहरु रहेका छन् । सल्यान थारमारे भन्ने गाउँ औंलामा गन्न सकिन्छ । त्यहाँ पनि हामी पुगेका छौं । ग्रामिण क्षेत्रमा सेवा पुर्याउनु हाम्रो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हो । रुपन्देहीको केरुपानी पनि सानो ठाउँ छ । कपिलवस्तुको बोर्डर एरियामा पनि हामी पुगेका छौं । सकेसम्म बैंकिङ् पहुँच पुर्याउनु पर्छ भनेर हामी लागेका छौं । हाम्रा शाखाहरु साना–साना ठाउँमा छन् । शहरउन्नमुख ठाउँमा हामीले शाखा खोलेका छौं ।
सरकारले खेल्नु पर्ने भूमिका चाँही के हो ?
–बैकिङ भनेको मुनाफामूलक संस्था हो । त्यसको साथसाथै सामाजिक उत्तरदायित्व पनि छ । सरकारले ग्रामिण क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउने हो भने बैंकको लागतलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो । हुम्लामा गएर शाखा खोल्दा नोक्सानमा जान सक्छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? टयाक्स छुट दिएर हुन्छ कि ? शुन्य लागतको निक्षेप सपोर्ट गरेर हुन्छ कि ? दोस्रो विषय शान्ति सुरक्षा कसले कामय गरिदिने ? बैकिङ् क्षेत्रको पूर्वाधार भनेको सडक र सुरक्षा हो । सडक र सुरक्षा नभएको ठाउँमा बैंक जान सक्दैनन । विद्युत पनि अनिवार्य शर्त हो । एउटा व्यवस्था सरकारले बनाइदिनु पर्यो । हिजोको दिनमा बिमान कम्पनीहरुलाई दुर्गम क्षेत्रमा उडान गरे बापत सरकारले विभिन्न सेवा प्रदान गर्ने गर्दथ्यो । त्यसैगरी दुर्गम क्षेत्रमा पुगेर सेवा दिने बैंकहरुको लागि पनि त्यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ ।
बैंकको कति वटा शाखा छन ?
–हाल ३३ वटा शाखा छन् । सात वटा प्रदेशमा नै हाम्रो उपस्थिति रहेको छ । सबै प्रदेशमा हाम्रो शसक्त उपस्थिति देखाउने योजनामा छौं । ५ नम्बर क्षेत्रमा हाम्रो बलियो उपस्थिति छ । अन्य प्रदेशमा सामान्य खालको उपस्थिति रहेको छ । सबै प्रदेशमा बलियो उपस्थिति बनाएर लैजाने हो । हाल हाम्रो १९ वटा एटिएम रहेको छ ।
तत्काल बैंकको शाखा खोल्ने के योजना छ ?
–आउने आर्थिक बर्षमा शाखा विस्तार गदैछौं । सात वटा शाखाहरु विस्तार गर्ने योजनामा छौं । कर्मचारीको सङ््ख्या २ सय ८५ जना रहेका छन् । टे«निङको कामलाई विकास गर्नुपर्छ । हाम्रा कर्मचारी दक्ष र सक्षम छन् । संस्थागत सुशासनलाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । समक्ष सापेक्ष रुपमा कर्मचारीलाई दक्ष बनाउदै लैजाने सोचमा छौं ।
राष्ट्र बैंकले पुँजी बृद्धि गर्न तोकिएकै समयसीमाभित्र पूँजी पुर्याउन कतिको सहज छ ?
–जति बेला पूँजी बृद्धिको घोषणा भयो त्यति बेला पुँजी कति थियो दुई बर्षमा हामी कतिमा पुग्यौ त ? सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको हिजोको दिनमा साढे ६४ करोड पूँजी थियो । दुई बर्षमा कति पुग्यो त ? २०७४ मा दुई अर्ब रुपैयाँ पुग्यो भनेत्यसपछि राष्ट्र बैंक गएर पचास करोड रुपैयाँ पुग्न सकेको छैन भनेर आग्रह गर्दा सुहाउँछ । साढे ६४ करोडमा नै मै सीमित रहने अनि समय दिनु पर्यो भन्ने राम्रो कु्रा होइन । राष्ट्र बैंकले दिएको समयसीमा भित्र पूँजी पुर्याउन इमान्दारीताको साथ प्रयास गरौं न । थोरै पुगेन भने छ महिना एक बर्ष अनि माग्न जाऔ । सुरुमा नै समय पुग्यो भन्नु भएन । सिद्धार्थ डेभलेपमेन्ट बैंकले दुई बर्षभित्र २ सय ५० करोड रुपैयाँ पुर्याउछ । हामी ढुक्क छौं । त्यहीं आधारमा अगाडि बढ्यौ नि त । राष्ट्र बैंकले पु्ँजी बृद्धि गर्नुपर्ने नीति ल्याएपछि सबै भन्दा पहिलो मर्जर पनि हामीले गर्यौ । साढे ६४ करोडबाट १ सय १५ करोड भइसक्यो । यस पटक बोनस सेयर दिदा १ सय ५० करोड हुन्छ । अर्को बर्ष फेरि बोनस सेयर खुवाइन्छौ पुग्छ । प्रयास गर्नेलाई समस्या हुँदैन । केही संस्था यस्ता छन जहाँको त्यहीं बसेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले हतारमा निर्णय गर्यो भन्छन नि ?
–त्यो भनाई न्यायोचित छैन । एउटा मर्जर प्रक्रिया पूरा गर्न छ महिना समय लाग्छ । अब मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेर त मर्जर हुँदैन । मर्जर गिभाइन टेक हो नि त । कहीँ न कहीँ उदार मन त राख्नु पर्यो नि । त्यो भने भने नहुने त केही पनि छैन । केहीले सक्ने केहीले नसक्ने भन्ने चिज हुँदैन । नसक्नु भनेको नगरेको हो भनेर बुझ्नु पर्यो । एकै पटक चार गुणा नहोला एक÷एक गरेर गरौं न । इमान्दारीतापूर्वक प्रयास गर्ने हो भने दुई बर्ष प्रयाप्त हो । नगर्नेलाई दुई बर्ष मात्र होइन वीस बर्ष दिए पनि पुग्दैन ।
–विचित्रको अवस्था रहेको छ । प्रभाव परेन भनौ कसरी भनौ । पर्यो भन्नौ बैकिङ् क्षेत्रको नाफा २५ प्रतिशतले बढेको छ । भुकम्प र आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या आयो । त्यो अवस्थामा नाफा घटनु पर्ने हो । बैकिङ् क्षेत्रको नाफा बढनु पर्ने ठाउँहरु देखिदैन । यथार्थ फरक छ । तत्काल असर देखिएन । दिर्घकालीन रुपमा असर देखिन सक्छ । नाकाबन्दीले एउटा पाठ सिकाएको छ,जुनसकै बेला पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई असर पुर्याउन र हल्लाउन सकिन्छ भन्ने देखियो । नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरु थोरै सचेत भए । ठूलो लगानीकर्ताहरु भित्र्ने अवस्था देखिएन । लगानीको वातावरण खुम्च्याएको अवस्था हो । वैदेशिक लगानीलाई असर गरेको अवस्था हो नि त ? दिर्घकालिन रुपमा बैकिङ् व्यावसायमा कठिनाई ल्याउँछ । तत्काल किन नाफा घटेन त भन्दा ब्याज आयो नाफा बढ्यो । अहिलेसम्म नाफा आएको छ । सेयर बजार माथि आएको छ । त्यहाँबाट आएको पैसाले बैकिङ् क्षेत्रमा पैसा आउने वित्तिकै नाफा देखियो । मालपोतमा जग्गाको कारोबार बढेको छ । भुकम्प आउदा १ हजार रहेको सेयर १६ सय नाघ्यो । साठी प्रतिशत नेप्से बढेको छ । यी क्षेत्रले बैकिङ क्षेत्रलाई टेवा दिइरहेको छ ।
बैंकको प्राथमिकताका क्षेत्र के हुन ?
–हामीले हाम्रो दायित्व पनि सम्झियौं । सरकारले ल्याएको बजेटको पहिलो प्राथमिकता कृषि कर्जा हो । अनुदान पाँच प्रतिशत पुरयाइदियो । एक करोडको सीमालाई हटाइदियो । बजेटको प्राथमिकता कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन खोजेको देखियो । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले कृषि कर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । हाम्रा शाखा तराईका जिल्लामा छन् । जहाँ कृषिको पहुँच रहेको छ । दोस्रो पिछडिएको वर्गको आर्थिक उन्नतीको लागि पनि लागि परेका छौं । आउने आर्थिक बर्षमा कृषि र विपन्न वर्गलाई टेवा पुरयाउने बाटोमा अगाडि बढ्छौं । सामाजिक उत्तरदायित्व र सरकारको नीतिमा टेवा पुर्याउनु पनि हाम्रो कर्तव्य हो ।
उर्जा र पर्यटन क्षेत्रमा नि ?
–हामीले यी दुवै क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं । आठ वटा हाइड्रोपावर कम्पनीमा हामी भागीदार छौं । पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलठूला होटलमा हामी भागिदार छौं ।
सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकको आगामी योजना के छ ?
–जेठ २८ गतेबाट हामीले संयुक्त कारोबार सुरु गर्यौ । हामी नेपालको दोस्रो ठूलो विकास बैंकको रुपमा रहेका छौं । १२ अर्ब भन्दा बढीको निक्षेप, साढे १० अर्ब भन्दा बढीको कर्जा लगानी गरेका छौं । अब हाम्रो लक्ष्य देशको सबै भन्दा ठूलो विकास बैंक बन्ने हो । व्यापार व्यवसाय र कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गछौं । ३५ देखि ४० प्रतिशत हाम्रो व्यापारलाई बढाउँछौ । सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक मर्जरपछि सरकारको संयुक्त लगानी रहेको विकास बैंक बनेको छ । यसको मेजर स्टेक होल्डरमा राष्ट्रिय बिमा संस्थान,राष्ट्रिय बिमा कम्पनी, सरकार थपिन आइपुगेको छ । संस्थागत उपस्थितिले बैंक बलियो हुन्छ । जनताको विश्वास बढ्छ । हामी अझ बढी बलियो र शसक्त रुपमा बजारमा देखा पछौं ।
भुकम्पपछि पुनर्माणमा पीडितको घर निर्माण गर्न बैंकको कस्तो भूमिका रहन्छ ?
–हाम्रो भ्रमिका रहन्छ । हामी सम्झौता गरेर काम अगाडि बढाउछौ ।
यति धेरै विकास बैंकको बीचमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकलाई नै रोज्नु पर्ने कारण के हो ?
पहिलो हामी ठूलो बलियो सक्षम र देशभरी फैलिएका छौं । विराटनगरमा पैसा जम्मा गरेर धनगढीमा पनि निकाल्न सक्छन । कस्टमर सर्भिर हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । हामीले दिने सेवा सुविधा अन्य बैंकले दिने भन्दा पृथक छ । सुरक्षा हाम्रोमा बढी छ । किनकी सरकारको स्वामित्व भएको संस्था हो । सुशासन बलियो छ । अरु बैंकको भीड भन्दा फरक छ ।
बैंकहरुको डाटामाथि ह्याक हुने क्रम बढ्यो भन्छन यसबाट बचाउन बैंकले कस्तो तयारी गरेको छ ?
–हामीले हाम्रो आइटीलाई सशक्त बनाउदै लगेका छौं । आगामी आर्थिक बर्षको लागि आइटीको लागि राम्रो कार्यक्रम तर्जुमा गरेका छौं । त्यसको लागि हामीले लगानी पनि बढाउँदै लगेका छौं । कमर्सियल बैंकहरुले राम्रो सुरक्षा अपनाउदा पनि डाटाहरु ह्याक भए ।
बाफियाप्रति उहाँको धारणा के छ ?
–प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोकिनु पर्दथ्यो तोकिएको छ । आठ बर्ष पर्याप्त समय हो । अहिले त दस बर्ष गरिएको छ । जहाँ–जहाँ सिइयोहरु १५–२० बर्ष बसेको अवस्था छ त्यो संस्थाको ग्रोथको रेड हेर्नुहोस । नेपालका प्रमुख कार्यकारीको कार्यकाल छ । मु्ख्य सचिव, सचिव राष्ट्र बैंकका गर्भनर लगायतको सबैको कार्यकाल तोकिएको छ । सिइयोको कार्यकाल दुई कार्यकाल पर्याप्त हो । आठ बर्षमा धेरै कुरा दिन सकिन्छ । सञ्चालकहरुको कार्यकाल तोकिनु हुँदैन । ति लगानीकर्ता हुन । तर व्यापारी र सञ्चालक भने छुटयाउनु पर्छ । बाफियामा संशोधन गर्ने क्रममा ति सबै प्रावधान गञ्जागोल भए । यसले संस्थागत सुशासन विग्रन्छ ।
देशको आर्थिक समृद्धिमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंकले खेल्ने भूमिका के हो ?
–हाम्रो नारा नै छ–‘विकासको लागि समर्पित ।’ कृषि कर्जा र विपन्न वर्गलाई प्राथमिकता हो । देश विकासमा सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक सबै भन्दा अगाडि देखियोस न त भन्ने चाहना हो । नाफा त जहाँबाट पनि कमाउला तर देशको विकासमा पनि टेवा पुर्याउनु पर्यो नि ।